မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁၄) - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၁၄)
thet naing မှ August 5, 2012 7:30pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဝေဒနာနုပဿနာ နောက်တစ်ခုက သုခဆိုတဲ့အထင်၊ လူတွေက အမြဲတမ်း ချမ်းသာတာကိုပဲ တွေးတယ်၊
ချမ်းသာတာကိုပဲ ကြံနေတယ်၊ကမ္ဘာပေါ်က လူတွေကိုပဲကြည့်၊ နှစ်သစ်ကူးရင် Happy
New Year လို့ လာကုန်ပြီ၊ Happy! Happy! နဲ့ နေတာပဲ၊ချမ်းသာဆိုတာကိုပဲ ရှာတာ၊
အဲဒီတော့ ဝေဒနာဆိုတဲ့ ခံစားမှုလေးတွေဟာ ချမ်းသာမှုလို့ ပဲ တွက်တယ်လေ၊ ချမ်းသာ
ရင် သုခဝေဒနာ စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်ရင် သောမနဿဝေဒနာ၊ အဲဒီ သုခဝေဒနာသည်ပင်
တကယ့်ချမ်းသာအစစ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ အတွေးမှား၊ အကြံမှား၊ အသိမှားတွေ ၀င်နေ
တယ်၊ မြတ်စွာဘုရားက သုခမဟုတ်ဘူး ဒုက္ခဆိုတာ သိအောင် ဝေဒနာနုပဿနာရှုပါ
တဲ့၊ နို့ မို့ ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေဟာ ကျေနပ်စရာလေးတွေ ဖြစ်နေတယ်ပေါ့၊ ဒါ
ကြောင့်မို့ဝေဒနာနုပဿနာကို မြတ်စွာဘုရားကဟောပါတယ်။
စိတ္တာနုပဿနာ နောက်တစ်ခါ စိတ္တာနုပဿနာ -ကိုယ့်စိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတွေဟာ ငါ့စိတ်
ကလေး ထာဝရရှိနေတယ်လို့ တွေးကြတယ်၊တကယ်တော့ စိတ်ဟာ လျှင်မြန်တဲ့အဟုန်
နဲ့ရွေ့ လျားနေတာ၊ စိတ်တစ်ခုရဲ့အတိုင်းတာဟာ ဘယ်လောက်မှ မကြာဘူး၊ခဏငယ်
၃-ချက်ဆိုတာ တစ်စက္ကန့် ကို အပုံများစွာ ပုံပြီးမှ သူ့ ရဲ့ အချိန်လေးကို ပြောလို့ ရမယ်၊ လက်ဖျစ်တစ်တွက် အချိန်ကလေးမှာ စိတ်ဟာ ကုဋေတစ်သိန်းလောက် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆို
တော့ နည်းတာမဟုတ်ဘူး၊ သို့ သော် သိပ်မြန်တဲ့ နှုန်းနဲ့ သွားနေတဲ့ စိတ်ကိုပဲ မြဲတယ်
လို့ ထင်ကြတယ်၊ အဲဒီအတွေးဟာ မှားတဲ့ အတွေးပဲ၊ အဲဒီ မှားနေတဲ့ အတွေးကို မှန်ကန်လာအောင်၊ ဒီအတွေးတွေ ပျောက်အောင် စိတ္တာနုပဿနာကို မြတ်စွာဘုရားက
ဒါက သတိကောင်းကောင်း ထူထောင်ပြီးတော့ သတိစွမ်းအားထက်လာမှ မမြဲတဲ့သ ဘောဟာ ပိုထင်ရှားတာ၊ ဗမာစကားတောင်ရှိသေးတယ်၊ “သတိမမူ ဂူမမြင်” တဲ့၊သတိ
တရားဟာ အလွန်အရေးကြီးတယ်၊ သတိထားလာရင် စိတ္တာနုပဿနာမှာ မမြဲတဲ့သ
ဘောတွေ တွေ့ လာတယ်၊ အလွန်လျှင်မြန်တဲ့ စိတ်ကလေးရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကို
ဓမ္မာနုပဿနာ နောက်ဆုံးတစ်ခုက ဓမ္မာနုပဿနာ၊ ဓမ္မဆိုတာ ကျန်တဲ့စိတ် စေတသိက် ရုပ်တွေ၊ စိတ်
ထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေတွေ အားလုံးပဲဖြစ်တယ်၊ ဒီသဘာဝတရားတွေကို ကြည့်
ပြီး ငါဆိုတဲ့ အတွေး(သို့ မဟုတ်) အတ္တဆိုတဲ့ အမြင်မျိုး မြင်နေကြတာ၊ အဲဒီ မှားယွင်း
တဲ့ အတွေးတွေ၊ မှားးယွင်းတဲ့ မှတ်သားမှုတွေ၊ မှားယွင်းတဲ့ အသိတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ 
အတွက် ဓမ္မကိုလည်း သတိနဲ့ စောင့်ကြည့်ဖို့ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
လူတွေမှာ မှားနေတာက မတင့်တယ်တာကို တင့်တယ်တယ်လို့ ၊မချမ်းသာတာကို ချမ်းသာတယ်လို့ ၊မမြဲတာကို မြဲတယ်လို့ ၊အတ္တမဟုတ်တာကို အတ္တဟုတ်တယ်လို့ 
ထင်တယ်၊အဲဒီ မှားယွင်းနေတဲ့အမြင်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ အတွက် သတိရဲ့ အာရုံ ၄-မျိုး
ကို ဟောပြီး ဒီပေါ်မှာ လေ့ကျင့်လိုက်ရင် အထင်မှားမှုတွေဟာ အားလုံးဖယ်ရှားပစ်နိုင်
ပြီတဲ့၊ ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟာ သတိပဋ္ဌာန်တရားကို ၄-မျိုးထဲ ဟောတာပါတဲ့။
နောက်တစ်နည်း ရှင်းပုံတစ်ခု ရှိသေးတယ်၊ တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင် လမ်းစဉ် ၂-မျိုး ရှိတယ်…။ သမထလမ်း၊ ၀ိပဿနာလမ်း၊ သမထကျင့်စဉ်နဲ့သွားမှာလား၊ ၀ိပဿနာ
ကျင့်စဉ်နဲ့သွားမှာလား၊ သမထကျင့်စဉ် ကျင့်တဲ့လူဟာလည်း ထက်မြက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိ
သလို ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်၊ ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် မြတ်စွာဘုရားက ထင်သာမြင်
သာအောင် ကာယနုပဿနာကိုပေးတာ၊ သမထကျင့်စဉ် ကျင့်ချင်ရင် ကာယနုပဿနာ
နဲ့ကျင့်လို့ ပြောတာ၊ ထက်မြက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ အဲဒီထက်သိမ်မွေ့ တဲ့ ဝေဒနာ-
နုပဿနာ နဲ့ ကျင့်ပါလို့ ပြောတာ။
ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က “တပည့်တော်တို့ တော့ ၀ိပဿနာလမ်းကြောင်းပဲတိုက်ရိုက်သွားမယ်” ဆိုရင်..သိပ်ပြီး မထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆို စိတ္တာနုပဿနာ၊ စိတ်ဆိုတာ သိသာတယ်ပေါ့၊
ကျန်တဲ့ ဓမ္မတွေကျတော့ သိဖို့ နဲနဲခက်လာတယ်၊ ဒါကြောင့် ဓမ္မာနုပဿနာက ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ဖြစ်တယ်၊ ဒီလို သမထယာနိက အတွက်က ၂-ခုဆိုတော့
၄-ခု မဖြစ်ဘူးလား၊အာရုံ ၄-မျိုး ခွဲဟောတယ်။
နောက်တစ်ခု အဋ္ဌကထာဆရာတွေ ရှင်းပြတာက…ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ၂-မျိုးရှိတယ်၊ အတွယ်အတာ အားကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က တစ်မျိုး၊ အတွေးအမြင် မှားယွင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က
တစ်မျိုး၊ အတွယ်အတာ အလေ့အကျင့် ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တဏှာဝိစရိတ- တဏှာ
အဖြစ်များတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က တစ်ခု၊ ဒိဋ္ဌိဝိစရိတ အယူအဆ မှားယွင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ခု။
လောကမှာ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ် ၂-မျိုး ရှိတဲ့အထဲက တဏှာဝိစရိတ-အတွယ်အတာ အဖြစ်များ တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် အတွယ်အတာဖြစ်မှုက သိပ်ပြီးတော့ မထက်မြက်ဘူးဆိုရင်၊ မပြင်း
ထန်ဘူးဆိုရင် ကာယနုပဿနာကို ကျင့်ရမယ်၊ ပြင်းထန်မယ်ဆိုရင် ဝေဒနာနုပဿနာ
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ(Ph.D)၏ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်အနှစ်ချုပ်မှ ကူးယူပူဇော်ပါသည်။
mmt သည် August 8, 2012 က 2:41amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ၀ိစရိတ အကြောင်းကိုသိမှတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ ရှိပါစေ။ နီစံ (အနီ) သည် August 7, 2012 က 8:23amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သာဓု သာဓု သာဓု ပါ
စာအုပ်က မဖတ်ဖြစ်တော့ ခုလိုဘလော့ဖတ်ရတော့..အဆင်ပြေတယ်.. RSS
Top News · Everything Htain Lin Oo liked thein wai's blog post 'ရဟန္တာဖြစ်လျက် ဆွမ်းတစ်နပ်မှ ၀အောင် မဘုန်းပေးရခြင်း အကြောင်း။'1 minute agodimplemit leftacomment for သင်းသင်းစိုး"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"1 minute agodimplemit leftacomment for htunhlaaung"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"1 minute agoHtain Lin Oo liked thein wai's blog post 'လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အထဲမှာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘာဖြစ်မလဲ ?။'1 minute agodimplemit leftacomment for Aye Aye Myat"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"2 minutes agodimplemit leftacomment for yehtetaung"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"3 minutes agoHtain Lin Oo liked thein wai's blog post 'ပြုပြင်စရာတွေ ပြုပြင်ကြပါ။'6 minutes agodimplemit leftacomment for လွမ်းလိုက်တာဗျာ"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"6 minutes agodimplemit leftacomment for sandawbartha"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"8 minutes agodimplemit leftacomment for phyokoko"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"9 minutes agosandawbartha, phyokoko, လွမ်းလိုက်တာဗျာ and4more joined ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺11 minutes agodimplemit posted blog postsတန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၄တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည် ....၃တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၂1 more…25 minutes ago More... RSS